Hlanganisa uhlobo lochwethezo kunye neefonti kwi logo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Sonke esazi okuncinci malunga noyilo siyazi ukuba zininzi iindlela zokudibanisa iintlobo ezahlukeneyo zoonobumba, kodwa ukuze senze oku kufuneka sazi ukuba zeziphi iindima ezahlukileyo iintlobo zetypography kwaye kufuneka unike iinkcukacha kwiimpawu abanazo.
Kukho indawo eqhelekileyo esixelela oko akufuneki sisebenzise ngaphezulu kweendidi ezintathu zoonobumba kuyilo, ilogo isebenzisa uhlobo olunye okanye ezimbini ukuze kungabikho ngaphezulu kwesithathu ekufuneka zisetyenzisiwe kuyilo. Xa sifuna i-header ukuba ivelele kufuneka Sebenzisa ifonti eyahlukileyo ukuyenza ibonakale, nangona inokwenziwa ngesibindi okanye ngokongeza omnye umbala, kodwa kufanelekile ukuba ikhankanywe ukuba azikho zininzi iifonti ezisetyenzisiweyo.
1 Funda ukudibanisa iifonti
2 Khetha uhlobo lwefonti ngokuchanekileyo
Funda ukudibanisa iifonti
Khetha ifonti idla ngokuba ngumsebenzi onzima, Oku kuhlala kungenxa yokuba ii-brand kufuneka zikhethe uhlobo lwefonti oluzinzileyo abaza kuyisebenzisa kuwo wonke umsebenzi owenziweyo, oku kunokuba yingxaki kuba kwezinye iimeko ifonti ayihambelani nobungakanani yoyilo kubalulekile ukufumana enye esemgangathweni kwaye inokusetyenziswa ngeendlela ezininzi.
ukuba khetha ifonti yokuqala kubalulekile ukufumana isixhobo esikhuselekileyo esinokusinceda kulo msebenzi. Ezi zixhobo akufuneki zikhethwe ngethiyori, kufuneka ukhethwe ngokobuntu bakho, uphawu ngalunye lunobuntu obahlukileyo, ke kuya kufuneka ukhethe izinto ezimbini ezahlukeneyo ukuze xa zisetyenziswa kunye zibonakale zilungile.
Kuya kufuneka uhlale uyikhumbula loo nto ifonti kufuneka isebenze ngokuchanekileyo ngolokuqala ofuna ukulusebenzisa, umbono kukufumana into ehambelana nohlobo lokuqala lonobumba. Abalinganiswa abaninzi benziwa nge-serif kodwa zingenziwa ngaphandle kwayo kwaye ixabiso lokudibanisa imithombo eyahlukileyo kwaye iyancedisana kukuba le fomu ihlala ifana kodwa umahluko mncinci, kodwa kunokuba yinto efunekayo ukuze ukwazi ukubona i-http eyongezelelweyo .
Ukuba ukhethe umthombo omnye umzimba ufundeka, ungakhetha ifonti yesikrini eyahlukileyo, kwakhona ukuba ukhetha uhlobo lwejiyometri lomzimba kuya kufuneka ucinge ngesimbo sobuntu ngakumbi kwaye ukuba isitayile esishushu kufuneka usichasanise nesitayile esinamandla ngakumbi.
Eyona ndlela ilula yenza umahluko Kukwazi ukuba loluphi uphawu lokuqala olubonakala kwifonti ephambili, kwaye emva koko ukhangele olunye olunophawu oluphambili lwento yokuqala njengophawu lwayo. Olu khetho lusivumela yenza indalo eyahlukeneyo ngomnwe wobuntu kwaye ubonakale ubukeka.
Khetha uhlobo lwefonti ngokuchanekileyo
Khetha uhlobo lohlobo olufanelekileyo ibaluleke kakhulu kuba yile nto eza kusivumela ukuba sitsale abaphulaphuli bethu, hayi kuphela kubaqulunqi begraphic oku kubalulekile kodwa nakwimeko yabantu abanamaphepha ewebhu, ngabokuqala ukuyazi loo nto ukuba ifonti ayitsali amehlo kwaye ichanekile, abantu baya kuwashiya amaphepha akho kuba akukho lula ukuba babone kwaye kunzima ukuba bafunde.
Kwimeko ye abayili bemifanekiso Inxalenye yokwenza iilogo ibalulekile kuba ukuba uhlobo olunye lohlobo aluhambelani nolunye, ngekhe kubelula ukufunda into eyithethayo ukuze abantu bangazukuthatha ixesha lokwenza umzamo wokufunda kwaye ilogo ayinakuba nengqondo yoku ifom.
Njengoko sibona, kubalulekile ukuthatha ixesha ukuya khetha eyona font Sifuna ukuyisebenzisa kwaye kufuneka songeze ukubamba kobuntu ukuyenza ibonakale ngakumbi. Ezi zizinto eziza ngokuziqhelanisa, ke eli nqaku linokuba luncedo kakhulu Kubantu abaqala okanye kwabo banamathandabuzo malunga nendlela ekufuneka bekhethe ngayo imithombo yabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Hlanganisa iifonti